HPC199 AI အ ယာဉ်ကောင်တာအဝင်နှင့်အထွက်ယာဉ်များကိုရေတွက်သောယာဉ်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုလည်းရေတွက်ရန်သို့မဟုတ်လူ ဦး ရေတွက်ချက်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါတို့အတော်များများယာဉ်ကောင်တာ မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ plagiarism ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကြောင်းအရာသိပ်မထည့်ခဲ့ပါ။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်ထံပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ယာဉ်ကောင်တာ.
HPC199 AI အ ယာဉ်ကောင်တာ ပစ်မှတ်ခြေရာခံခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများကိုလွတ်လပ်စွာပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ AI အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ပန်ကာတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ၎င်းကိုထိန်ချုပ်နှိမ်နင်းခြင်း၊ ယာဉ်အရေအတွက်၊ လူ ဦး ရေထူထပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်း၊ managementရိယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြားအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ HDC199 AI နှင့်အဆင့်မြင့်ဗီဒီယို A များပြားစုံလင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်းစုံတွက်ချက်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ် DVR hard disk video recorders များနှင့်လည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ယာဉ်ကောင်တာ အင်တာနက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သီးခြားရပ်တည်နိုင်ပြီးစီးပွားဖြစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ လက်လီရောင်းဝယ်မှု၊ ပန်းခြံများ၊ ဘဏ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသိဉာဏ်ပြည့်ဝသောလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းပေးနိုင်သည်။
HPC199 AI အ ယာဉ်ကောင်တာ အမြင်အာရုံထောင့်ကြောင့်မထိခိုက်သောအသွားအလာစာရင်းအင်း function ကို, ပေါင်းစပ်။
အများဆုံးမြင်ကွင်းမြင်ကွင်းသည်မီတာ ၂၀ အထိလွှမ်းခြုံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပစ်မှတ် ၅၀ ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။
ယာဉ်အရေအတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောareaရိယာနှင့်ပစ်မှတ်အရေအတွက် ဦး တည်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်သည်။
တစ် ဦး တည်းသာ HPC199 မော်တော်ယာဉ်ကောင်တာ အဝင်နှင့်အထွက်ယာဉ်များ၏သီးခြားစာရင်းဇယားကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
HPC199 AI အ ယာဉ်ကောင်တာIP65 ရေစိုခံဒီဇိုင်းကိုတီထွင်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်ရေပြင်တွင်သုံးသည့်တိုင်တူညီသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူယာဉ်အရေအတွက်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ HPC199 AI အ Vehicle ကောင်တာ မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်ပစ်မှတ်အရိပ်များ၏သက်ရောက်မှုကိုအလိုအလျောက်စစ်ထုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ညအချိန်၌ပင်အားနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်အလင်းဖြင့်အလွန်အထိခိုက်မခံသောရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်မော်တော်ယာဉ်ရေတွက်စာရင်းဇယား။ ဘယ်အချိန်မှာ HPC199 AI အယာဉ်ကောင်တာ ပစ်မှတ်ကိုတိကျသောထောင့်ဖြင့်တိတိကျကျခွဲခြား သတ်မှတ်၍ မရပါ။ အသိအမှတ်ပြုနှုန်းတိုးတက်စေရန်ပစ်မှတ်နမူနာကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ပစ်မှတ်သင်ယူမှုနှင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ယာဉ်ရေတွက် HPC199 ၏ function ကို
၁။ ကွန်ယက်အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကွန်ယက်အချိန်ထပ်တူပြုခြင်း၊
၂။ ဒစ်ဂျစ်တယ် 3D ဆူညံမှုလျော့ချခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်၊ ပုံသည်ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူသည်။
3. 1 RJ45 interface ကို, 1 DC12V interface ကို, 1 ခက်အဆက်အသွယ် interface ကို, 1 RS485 interface ကို။
4. ONVIF ပရိုတိုကော၊ နိုင်ငံအဆင့်စံ G28181 protocol ကိုထောက်ပံ့ပါ။
၅။ ခရီးသည်စီးဆင်းမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်စီးဆင်းမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ areaရိယာထိန်းချုပ်မှု၊
၆။ ပါဝါချို့ယွင်းမှု / မျှော်လင့်မထားသောပျက်ကွက်မှုပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ပါ။
၇။ Support character superposition၊ superposition အနေအထားကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီးအလိုအလျှောက်ပြောင်းပြန်အရောင်ပြသခြင်း။
၈။ စက်မှုအဆင့်ဒီဇိုင်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တိကျမှုနှင့်ခိုင်ခံ့မှုတည်ငြိမ်မှု။
၉။ နေ့ရောညပါစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုသိရှိရန်စစ်ထုတ်စက်များအလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်းကိုပံ့ပိုးပါ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုထောက်ပံ့ပါ။ POE power supply (optional ကို) ။
၁၀။ ပံ့ပိုးမှုပေးသည့်မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုထောက်လှမ်းခြင်း / မျက်နှာပြင်ပိတ်ခြင်း၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောနေရာ ၄ ခုနှင့် occlusion ဒေသ ၄ ခုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၁။ အသုံးပြုသူသည် code stream ကို ရွေးချယ်၍ frame rate, resolution နှင့် video အရည်အသွေးတို့ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး mode ကို
DC12V ပါဝါ Adapter ကို
Binuclear ARM cortex A53 1.5GHz 32KBI-cache ကို
SONY IMX, ၁ / ၁.၈ "Progressive Scan CMOS
0.1 Lux (ညအချိန်၌ Streetlight ပတ် ၀ န်းကျင်)
10-30 ဘောင် / စက္ကန့်
Main stream 3840 × 2160 Sub စီး 1280 × 720
ယာဉ် attribute ကိုခွဲခြား
ဘတ်စ်ကား၊ ထရပ်ကား၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် (သုံးဘီး) / စက်ဘီး
Web software ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
ကွန်ယက်ကို port, 485 ဆိပ်ကမ်းကို
မော်တော်ယာဉ်ရေတွက်ရန် HPC199 AI ယာဉ်တန်ပြန်ဗီဒီယို
ကျွန်တော်တို့မှာ IR အမျိုးအစားများစွာရှိသည် ယာဉ်ကောင်တာ, 2D, 3D, AI အ ယာဉ်ကောင်တာ, သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုအမြဲရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ ယာဉ်ကောင်တာ 24 နာရီအတွင်းသင်တို့အဘို့။
ရှေ့သို့ MRB AI ကိုလူအစုအဝေး HPC198 တန်ပြန်
နောက်တစ်ခု: MRB ဦး ခေါင်းရေတွက်ကင်မရာ HPC010
MRB 3D ပြည်သူ့ရေတွက်စနစ် HPC009
MRB ဦး ခေါင်းရေတွက်ကင်မရာ HPC010
MRB AI ကိုလူအစုအဝေး HPC198 တန်ပြန်